Aussiedoodles: ခွေးကမ္ဘာ၏အိုင်းစတိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန် - Breeds
သငျသညျအထဲကအဲဒီမှာအထူးချွန်ဆုံးနှင့်ချစ်စရာအကောင်းဆုံးလူကိုချစ်တဲ့ခွေးနှစ်ခုရောနှောလျှင်သင်ဘာရမလဲ အဆိုပါကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော Aussiedoodle!
အဖြစ်လူသိများ သြစတေးပေါ ဒါမှမဟုတ် Aussie Poodle , သြစတြေးလျ Shepherd Poodle ရောနှောခြင်းသည်ခွေးတစ်ကောင်၏ကမ္ဘာပေါ်ရှိအိုင်းစတိုင်းကလေးငယ်တစ် ဦး ၏ဘွဲ့ရရှိထားသည့်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောအပြန်အလှန်မျိုးပွားခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုမိုလေ့လာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ငါတို့နှင့်အတူ နေ၍ scroll လုပ်ပါ။
temperament: Aussiedoodles ဟာမိသားစုခွေးကောင်းကောင်းလား။
ဤတွင်သင်၏ Aussiepoo သူငယ်ချင်းကိုမည်သို့စောင့်ရှောက်ရမည်နည်း
ငါတစ်ခုလိုချင်တယ်! Aussiedoodle ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
သင်တို့အဘို့ Doodles ပို!
ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ - သင် Aussiedoodle ကိုရသင့်သလား။
Aussiedoodle သည်ဒီဇိုင်းပညာရှင်မျိုးပွားများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည်ထက်ပိုမိုကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအချို့မှာမူ၎င်းတို့သည်မြောက်အမေရိကတွင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များကတည်းကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်ဟာ hybrids တွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာမိဘနှစ်ပါးစလုံးနှင့်အတူ Aussiedoodles အဖြစ်ခွေးပေါက်စများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လူအများစုက F1 ခွေးငယ်လေးကိုရှာဖွေသည် Australian Shepherd နှင့်သန့်စင်သော ခူး ။
သို့သော်ယင်းသည်အပြန်အလှန်ဖောက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် Aussiepoos ကို American Kennel Club (AKC) တွင်မှတ်ပုံတင်။ မရပါ။
ဒါဟာကဲ့သို့သောရောနှောမျိုးကွဲအသိအမှတ်ပြုရန်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါတယ်ကောင်းတစ် ဦး အရာပါပဲ အမေရိကန်ခွေးတစ်ကောင် Hybrid ကလပ် (ACHC), အ ဒီဇိုင်နာ Dogs ခွေးဂေဟာကလပ် (DDKC), အ နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်နာ Canine မှတ်ပုံတင် (IDCR) နှင့် ဒီဇိုင်နာမွေးမြူရေးမှတ်ပုံတင် (DBR) ။
ဒါဆိုသူတို့ကိုဘာကြောင့်ခွေးကောင်တွေဖြစ်စေနိုင်တာလဲ။ ဤသည် pooch သူတို့ရဲ့မိဘများ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကိုပေါင်းစပ် - သြစတြေးလျ၏စွမ်းအင်နှင့်အလုပ်ကျင့်ဝတ်နှင့် Poodle ၏စမတ်နှင့်သစ္စာရှိမှု။
သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းSheစတြေးလျ Shepherd Poodle ရောနှောခြင်းသည်၎င်း၏မိဘများကိုအမွေခံရလိမ့်မည်။ အသွင်အပြင်ရှိပေမယ့်အမြဲတမ်း ၅၀/၅၀ တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီ fido မှာနားနဲ့မျက်လုံးတွေကအညိုရောင် (သို့) မဲမှောင်နေပြီးတချို့မှာအပြာရောင်မျက်လုံးတွေရှိနိုင်တယ်။
သူတို့၏အမြီးများသည်ရှည်လျားပြီးအနည်းငယ်ကွေးကွေးနိုင်သကဲ့သို့ Poodle ကဲ့သို့ကွေးနိုင်သည်။
အရွယ်အစား: Aussiedoodle ဘယ်လောက်ကြီးလိမ့်မယ်?
ယေဘုယျအားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းသည်အရွယ်အစားတူကြသည်။ သူတို့မှာပျမ်းမျှအလေးချိန်ရှိတယ် 25 မှ 70 ပေါင် (11 မှ 32 ကီလိုဂရမ်) နှင့်အကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည် 10 မှ 15 လက်မ ပခုံးမှာအမြင့် (၂၅ မှ ၃၈ စင်တီမီတာ) ရှိသည်။
Aussiedoodles တွင်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သြစတြေးလျကို Poodle အရွယ်အစားသုံးမျိုးကိုမွေးထုတ်လို့ရလို့ပါ။ ကစားစရာ , သေးသေးလေး သို့မဟုတ် စံ ။
သေးငယ်သောသြစတြေးလျသိုးထိန်းများကိုလည်းသေးငယ်သောဗားရှင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်အချို့မျိုးဆက်များသည်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည် အလေးချိန် ၂၅ ပေါင် (၁၁ ကီလိုဂရမ်) နှင့် ၁၀ လက်မ (၂၅ စင်တီမီတာ) အောက်အလေးချိန်ရှိသောအရုပ်သို့မဟုတ်အသေးစား Aussie Poos ။
အကယ်၍ သူတို့သည်ထိုခြောက်လကြာအမှတ်အသားကို နှိပ်၍ နှေးကွေးခြင်းလက္ခဏာမပြလျှင်သင့်လက်၌ခွေးကြီးတစ်ကောင်ကိုသင်အလောင်းကောင်ရှိသည်။
မည်သည့်အရွယ်အစားမဆို Aussie doodle သည်မည်သည့်အိမ်မဆိုတွင်နေနိုင်သည်၊ သေးငယ်တဲ့မူကွဲတိုက်ခန်းဘဝများအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စွမ်းအင်ကိုသေးငယ်တဲ့နေရာတွေမှာရနိုင်တယ်။
Aussiedoodles hypoallergenic လား
အချို့သောပိုင်ရှင်များကသူတို့၏ Aussiedoodles သည် hypoallergenic ဖြစ်သည် သို့သော်မိဘတစ် ဦး မှပစ်ချပါကသင်မသွန်းလောင်းနိုင်သည့်ခွေးကိုသင်အမြဲအာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကဒီစပ်နိုင်ပါတယ် အနိမ့်သွန်းမှ Non- ။
သူတို့ထဲကအများစုဟာရာသီအလိုက်သွန်းလောင်းထားတဲ့နွေရာသီနဲ့ကျဆုံးခြင်းတွေထဲမှာ undercoat တွေပါ။ သင်မတည့်ပါကသြစတြေးလျ Shepherd Poodle ရောစပ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။
အချို့မှာလှပသော၊ ကောက်ကောက်သို့မဟုတ်ဖြောင့်သောအမွေးများရှိသည် ။ ၎င်းတို့သည်အနီရောင် Merle၊ အပြာရောင် Merle၊ အနက်ရောင်နှင့် tan (Phantom ဟုလည်းခေါ်သည်)၊ အနက်ရောင်နှင့်အနီရောင်သုံးရောင်ခြည်၊ Sable၊ parti သို့မဟုတ်အစိုင်အခဲအရောင်များကဲ့သို့သောအရိပ်အမျိုးမျိုးတွင်လည်းတွေ့ရသည်။
သူတို့ဟုတ်ပါတယ်! သူတို့ကအိုင်းစတိုင်းမျိုးနွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းဤခွေးများသည်လှည့်ပတ်သွားလာရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိသကဲ့သို့အထုပ်တစ်ခုလုံးသည်သူတို့၏မိုက်မဲလှသည့်လှောင်ပြောင်မှုများကိုခံစားကြလိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေအဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ပြရန် ပျော်စရာရှိသည်ဖို့ကိုချစ်ကြောင်းပျြောလူရွှင်တော် ။
ချစ်စရာကောင်း။ ရယ်စရာကောင်းသော Aussiedoodles ၏ဤဗီဒီယိုကိုကြည့်နိုင်သည်။
သူတို့ကမင်းကိုလက်ဆွဲပြီးထွက်ပြေးဖို့အတွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်။ သူတို့ဟာလိုက်ဖမ်းတာ၊ လိုက်ဖမ်းတာ၊
မြေကြီးပေါ်တွင်မြဲမြံစွာအေးဆေးစွာနေနိုင်သောခွေးတစ်ကောင်ကိုသင်လိုချင်ပါကအခြားနေရာတွင်ရှာပါ။ ဤခွေးဖြစ်ကြ၏ bouncy, boingy, springy jumpers ။ သင့်မှာခြံစည်းရိုးတိုနေရင်သတိထားပါ။
နေပါစေသူတို့လုပ်နေလုပ်နေအဘယ်သို့သူတို့ w သူတို့လူမျိုးနှင့်အတူနေခြင်းငှါ၎င်း၊ ။ ခရီးသွားလာ? သင့်ရဲ့ Aussiedoodle ယူလာပါ။ အလုပ်လုပ်နေတာလား သူတို့ကိုရုံးကိုယူပါ။ ဆရာဝန်ချိန်းဆိုမှုလား။ နောက်တာပါ! သငျသညျသူတို့ကိုခွင့်ပြုလျှင်သော်လည်း, သူတို့သည်သင်နှင့်ပူးပေါင်းချင်ပါတယ်။
အဆင်မပြေတာကသင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးဟာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာပြီးရလဒ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် စိုးရိမ်စိတ်ခွဲခြာ ။
မင်းရဲ့ Aussiepoo ဟာကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအိပ်လိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ရင်နောက်တစ်ခါပြန်စဉ်းစားပါ။ သူတို့သည်သင်နှင့်အတူအိပ်ရာ၌သာမကသင်၏ခေါင်း၌ (နှင့်တခါတရံတင်းပါး) ကိုခေါင်းအုံးနှင့်သင်၏ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်အိပ်ချင်ပါလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကိုသင်တစ် ဦး အတွက်အိပ်ရန်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည် သေတ္တာ သို့မဟုတ်အခြားအခန်းတစ်ခန်း, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့အကြိုက်ဆုံးလူ့နှင့်အတူနေသည့်အခါထက်ပျော်ရွှင်ဘယ်တော့မှပါပဲ။
သူတို့ပါပဲ သူတို့ကကလေးများနှင့်အတူဂရုစိုက်ကြောင့်စုံလင်သောမိသားစုခွေး သင်၏သူငယ်များကိုပင်ကျွေးမွေးမည်။
သို့သော်သတိထားပါ။ Aussiedoodle ကကလေးငယ်ကိုလှည့်ပတ်နေလို့စိတ်လှုပ်ရှားနေရင်ပိုကြီးတဲ့ Aussiedoodle ကကလေးကိုခေါက်လိမ့်မယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်မှုမဖြစ်အောင်သင်၏ pooch ကိုသင်အမှန်တကယ်လေ့ကျင့်ချင်ပါတယ်
သင်သည်သင်၏ Poodle & Australian Shepherd ပေါင်းစပ်မှုအားသင်အားအခါအားလျော်စွာသင်ကလေးများကိုပတ် ၀ န်းကျင်၌ထားရန်ခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေသင်ကြားသည်ဖြစ်စေ၊ သော့သည်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုဖြစ်သည်။
ဒါက စမတ်ဖောက် ဒါကသင့်ကိုနှစ်သက်စေချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်လုပ်သင့်တာကတော့သူမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုလုပ်တဲ့အခါသူ့ကိုစိတ်ချစေတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်ထွက်ခွာသောအခါသင်၏ Aussiedoodle အားအေးဆေးတည်ငြိမ်ပါကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။
သငျသညျပြန်ရောက်လာသောအခါ, သင်ဝေးဖြစ်ကြောင်းကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ခဲ့တူသောပြုမူ။ ထို့နောက်အချိန်အတန်ကြာလျှင်သူ့ကိုကောင်းကောင်းပြုမူဆက်ဆံရန်သင်အားပေးနိုင်သည်။
ကလေးငယ်တွေဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ doggo ကိုသူလေးစားမှုနဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ သူသည်ကလေးများအားထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ရန်သို့မဟုတ်ထိုင်ရန်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် rambunctious အပြုအမူအားတားဆီးပါ။
တွေ့ဆုံခြင်း Ziggy, Aussiedoodle Mini - ပုံရင်းမြစ်
ဒီစပ် ဟောင်အများကြီးလုပ်ဖို့လေ့မထားဘူး သို့သော်မည်သည့်ခွေးနှင့်မဆိုကဲ့သို့၎င်းသည်မည်သို့ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်မည်သို့လေ့ကျင့်ပေးသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့သြစတေးလျမိဘကြောင့်မင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုကမင်းရဲ့ Aussiedoodle ကမင်းရဲ့အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။
သင့်ရဲ့ကလေးကိုစနစ်တကျဆုံးမသွန်သင်မယ်ဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့၊ သူတို့အကာအကွယ်သို့မဟုတ်ရန်လိုမရကြဘူး ။
သို့သော် Poodle မိဘထံမှအမွေရခဲ့သောဤကောင်းကျိုးသည်ရေနှင့်ရေကူးခြင်းကိုချစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသူတို့ကိုအံ့သြဖွယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမသာစေသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့လည်းပါပဲ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကုထုံးသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုခွေး ။
သူတို့၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ Aussiedoodles သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို PTSD ရှိလူများအတွက်ရုန်းကန်မှုကိုလျှော့ချခြင်း၊
ဒီဒီဇိုင်နာခွေးကရေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တောင်ဒါကသူတို့ဟာစူပါရေအေးဒါမှမဟုတ်ရာသီဥတုကိုကိုင်တွယ်နိုင်တယ်လို့မဆိုလိုပါ။ သငျသညျသူတို့ကိုရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းအိမ်ပြင်တစ် ဦး တည်းထားခဲ့ချင်ကြဘူး။ ထို့အပြင်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည်သူတို့၏အင်္ကျီပေါ် မူတည်၍ လွယ်ကူသည်။
သွန်းလောင်းမထားသည့်ခွေးများသည်ပိုမိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီ crossbreed နိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမဟုတ်ပါဘူးဟုပြောနိုင်ပါတယ်။
တစ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိသည် အခြားနေ့တိုင်းသင့်ရဲ့ Aussiedoodles ကုတ်အင်္ကျီ နှင့် ၈ ပတ်မှ ၁၂ ပတ်တိုင်းကိုဖြတ်တောက်သည်။
ရာသီသွန်းလောင်းစဉ်အတွင်းကသူ့ကုတ်အင်္ကျီကိုနေ့စဉ်ဆေးကြောဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ Matting ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သူတို့၏ဆံပင်အချို့ကိုသူတို့၏သားမွေးများထံမှထုတ်ယူရန်။
သင်သည်သင်၏ pooch ကို er ည့်သည်တစ်ယောက်ထံသို့ခေါ်ဆောင်လာပါကကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်ညှပ်ပုံစံများကိုသင်တောင်းခံနိုင်သည် - တိုတို၊ အသံကျယ်သောကလစ်များမှရှည်လျားသောစီးဆင်းနေသောသဘာဝဖြတ်တောက်မှုများအထိသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ဤဗီဒီယိုတွင် Aussiedoodle ကိုမည်သို့ဝတ်ဆင်ရမည်သို့မဟုတ်မည်သို့ချုံ့ရမည်ကိုပြသည့်ကျွမ်းကျင်သော groomer တစ်ယောက်နှင့် Maximus ပါရှိသည်။
အနည်းဆုံးတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သူတို့၏နားကိုစစ်ဆေးပါ နှင့်aကိုသုံးပါ အဖြေ သူတို့ကိုသန့်ရှင်းခန်းခြောက်ရန်။ သူတို့ရဲ့နားကိုနံ့နဲ့နီရဲအောင်ရှာပါ။ Poodles နှင့်အတူရုန်းကန်နေရသည့်ဘက်တီးရီးယား (သို့) တဆေးကူးစက်မှုလက္ခဏာများကိုသင်သတိထားပါ။
သငျသညျအထူးသဖြင့်သူတို့တစ်တွေခွေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့၎င်းတို့၏လမ်းအလုပ်လုပ်လျှင်သေစေနိုင်သော foxtails, များအတွက်စောင့်ကြည့်ချင်တယ်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် Aussiedoodles တွင် foxtails ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အင်္ကျီမျိုးရှိပြီး၎င်းတို့သည်အလွယ်တကူဖုံးကွယ်နိုင်သည်။
ခွေးအများစုလိုပဲ၊ တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သူတို့၏လက်သည်းများကိုချုံ့ပါ ။ သငျသညျ tile ကိုသို့မဟုတ်သစ်မာပေါ်မှာကြောင်း click- clack ကြားလျှင်, ကတိများအတွက်အချိန်ပါပဲ။
သို့သော် Aussiedoodles ကစားစရာသို့မဟုတ်အသေးစားသည်နေ့စဉ်သန့်စင်ရန်လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခွေးငယ်များသည်သွားဖုံးနှင့်သွားများပြproblemsနာများဖြစ်လေ့ရှိသည်။
သင်၏သားမွေးကလေး၏သွားများကိုပွတ်တိုက်ရန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါကသင်ရနိုင်သည် သွားအရုပ် သို့မဟုတ်အလုပ်နှင့်အတူကူညီပေးဖို့ကပ်လျက်။
Australian Shepherd Poodle ရောနှောခြင်းသည်ခွန်အားမြင့်မားသောခွေးများဖြစ်သည် ။ သူတို့ကိုသင်ပေးရမယ် လှုပ်ရှားမှု၏ 60 မှ 90 မိနစ် ။ တနည်းကား, သင်၏သင်၏ Aussiedoodle ရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်လိမ့်မယ် - သေးငယ်တဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များလေ့ကျင့်ခန်းလျော့နည်းလိုအပ်သည်။
ပြီးတော့သူတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေလိုတယ် - ရပ်ကွက်ထဲကိုနူးညံ့တဲ့လမ်းလျှောက်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်ရေကူးခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ ခုန်ခြင်း၊
Aussiedoodle ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထားချင်တယ်။ လိမ္မာပါးနပ်သောခွေးတစ်ကောင်သည်သင်သူတို့ကိုအလုပ်တစ်ခုမပေးလျှင်အမြဲတမ်းတစ်ခုခုရှာတွေ့လိမ့်မည် - သင်သူတို့ဆုံးဖြတ်ရန်သင်မကြိုက်ပေ။
အစာကျွေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ, Aussiedoodles ဖြစ်ကြသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည် ဒါသူတို့ကိုမကျွေးပါ။ ရယူထားသောကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အချိန်ဇယားရှိသည်။ ဤသည်မှာမည်သည့်ဇီဇာကြောင်သောအစားအစာများကိုမဆိုတားဆီးနိုင်သည်။
သူတို့ကိုအရည်အသွေးမြင့်ခြောက်သွေ့သော kibble ကိုကျွေးပါ ကျန်းမာရေးကို ဦး စားပေးသောအရာဖြစ်သည်။ အရွယ်အစား၊ လှုပ်ရှားမှုအဆင့်နှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် မူတည်၍ အစားအစာနှင့်အစားအစာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သင့်သည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် Aussiedoodle သည်စားသုံးနိုင်သည် တစ်နေ့လျှင်ခွေးစာ ၂ ခုံမှ ၃ ခွက်အထိရရှိသည် နှင့်နှစ်အစားအစာများသို့ခွဲခြားရပါမည်။
ခွေးအားလုံးမှာကျန်းမာရေးပြproblemsနာရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် Aussiedoodles မှာတခြားခွေးတွေထက်နည်းတယ်။ ကံကောင်းခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောဂရုစိုက်မှုဖြင့်သင်၏ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသောမိတ်ဆွေသည်ပျော်ရွှင်နိုင်သည် ၁၀ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိသက်တမ်းရှိသည် ။
သင်ဂရုစိုက်ရမည့်ကျန်းမာရေးပြissuesနာအနည်းငယ် - တင်ပါးဆိုးရွားသောရောဂါများ၊ ivermectin sensitivity ကို နှင့်မျက်စိအတွင်းတိမ်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေသင်၏ furry pal သည် Vet သို့အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သငျသညျတစ် ဦး ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော Aussiedoodle အိမ်သို့ရောက်စေဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက, ရောနှောဝတ်ရည်အများအပြားအမိုးအကာအတွက်အဆုံးသတ်အထူးသဖြင့်ကတည်းက, ပထမ ဦး ဆုံးမွေးစားရန်ကြည့်ဖို့ကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါပဲ။
သင် ၀ ယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့မျိုးဆက် ။
သင့်ကိုမသွားခွင့်ပြုသူမည်သူမဆိုသူတို့၏ website တွင် PayPal ခလုတ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်လျှင်အမှိုက်သောင်းများစွာရှိသည်။
ဒါတွေပဲ နိမိတ်လက္ခဏာအချို့ အိမ်နောက်ဖေးခြံမှူးသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ခွေးများကိုခွေးပေါက်များမှရရှိသောသူများဖြစ်သည်။
မည်သည့် Aussiedoodles ရှိပါသလဲဆိုတာကိုသိရန် Humane Society လိုဒေသခံကယ်ဆယ်ရေးများကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
သြစတြေးလျကယ်ဆယ်ရေးနှင့်နေရာချထားခြင်း helpline (စိန့်ဂျော့ဂ်ျ UT)
မင်နီဆိုတာ၏သြစတေးကယ်ဆယ်ရေး (ဆတ်မြစ်၊ MN)
ကာရိုလိုင်းနား Poodle ကယ်ဆယ်ရေး (Pacolet, SC)
ဟူစတန်၏ Poodle ကယ်ဆယ်ရေး (ဟူစတန်, TX)
အနောက်မြောက် Aussiedoodles (Malad City, ID)
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်မျိုးဆက်များကိုထောက်ခံသည်ကိုသင်သတိပြုပါ၊ တ ဦး တည်းကောက်ယူမတိုင်မီသင်၏သုတေသနလုပ်ပါ ။
စျေးပေါတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဟာကောင်းတဲ့အရာလို့ထင်ရပေမယ့်သင်ကိုင်တွယ်ရမယ့်အမူအကျင့်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာတွေကရေရှည်မှာပိုပြီးစျေးကြီးသွားပြီး (စိတ်ကြေကွဲစရာ) ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်က Aussiedoodle ခွေးတစ်ကောင်ကို ၀ ယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်အမှိုက်သရိုက်လေးဟာကလေးတွေ ၆ ကောင်ကနေ ၇ ကောင်အထိရှိနိုင်တယ်။ $ 800 နှင့်အထက် ။
furball တစ်ခုချင်းစီ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်စိတ်ဝင်စားသော Aussiepoo ၏အရွယ်အစား၊ အင်္ကျီအရောင်နှင့်မျိုးဆက်အပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ အချို့သည်ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ လောက်စျေးကြီးနိုင်သည်။
သင်ကြည့်ရှုနိုင်သော Aussiepoo မျိုးဆက်အချို့ဖြစ်သည်။
Cottonwood Creek အဘိဓါန် Doodles (Salt Lake City, UT)
နှစ်ချက် R ကို Doodles (Stonefort, IL)
နေသာ Ridge Doodles (Temecula, CA)
အချို့သောပိုပြီးထင်ရှားတဲ့မျိုးဆက်များအရင်းအမြစ်များပါဝင်သည် နို့နှင့်ကော်ဖီ (Reno, NV) နှင့် ခွေးရူး ။ ဒေသဆိုင်ရာစာရင်းများကို CraigsList၊ Facebook သို့မဟုတ်သတင်းစာများတွင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ထိုတွင်တိကျသောမျိုးဆက်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
သင် Aussiedoodle သည်သင့်အတွက်မသင့်တော်ဟုထင်လျှင်နားလည်နိုင်ပါသည်။ ပြဿနာမရှိပါဘူး! သင်စဉ်းစားချင်သောအခြား Doodles နှင့် Poos စုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်။
Labradoodle (Labrador Retriever နှင့် Poodle ရောနှောခြင်း)
ရွှေဝါရောင် (Golden Retriever နှင့် Poodle ရောနှောခြင်း)
Bordoodle (Border Collie နှင့် Poodle ရောနှောခြင်း)
ကွမ်းခြံကုန်း (Old English Sheepdog နှင့် Poodle ရောနှောခြင်း)
.ရာဝတီ (Bernese Mountain Dog နှင့် Poodle ရောနှောခြင်း)
ကဗျာဆရာ (Cavalier King Charles Spaniel နှင့် Poodle ရောနှောခြင်း)
ပိုးဟပ် (Cocker Spaniel နှင့် Poodle ရောနှောခြင်း)
ဒါကမင်းနဲ့မင်းရဲ့ဘဝပုံစံပါပဲ။ Aussiedoodle ဟာသင့်မိသားစုကိုသင်ပေါင်းထည့်နိုင်သည့်ခွေးကဲ့သို့မြည်ပါသလား။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းမှုကသူတို့ကိုခုခံတွန်းလှန်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်။
ညာဘက်ဆံပင်ညှပ်နှင့်အတူဤခွေးgရာမ Teddy ဝက်ဝံများကဲ့သို့လေ့ပေမယ့်အရူးလုပ်မရကြဘူး။
သူတို့ပါပဲ စူပါစမတ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစွမ်းအင်အပြည့်အဝ ။ ဤရွေ့ကားတနေ့လုံးဆိုဖာပေါ်အအေးခံချင်သောခွေးမဟုတ်ပါ။
ရေကူးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကစားခြင်းနှင့်အကြိုက်ဆုံးလူများနှင့်အပန်းဖြေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လိုကြသည်။
သင်တို့သည်လည်းသူတို့ရာသီအလိုက် shedders နေသော်လည်းသူတို့ကစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ကြောင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီကြက်တူရွေးမျိုးကသင့်ကိုသူ့ရဲ့အရည်အသွေးတွေနဲ့ရတယ်ဆိုရင် တက်ကြွ၊ စမတ်၊ နှင့်အဆုံးမဲ့မေတ္တာပြည့်ဝ၏ - သူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်တ ဦး တည်းပါပဲ။
သင် Aussiedoodle ကိုဘယ်လိုထင်သလဲ အောက်ဖော်ပြပါထင်မြင်ချက်ကိုချန်။ သင်၏အတွေးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောဘယ်လ်ဂျီယံမာလင်နစ်လမ်းညွှန် - ၆ ချက်ကိုဖတ်ရမည်
mini australian သိုးထိန်းနယ်စပ် collie ရောနှော
rhodesian ridgeback တစ်ခုဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ
ဆံပင်ရှည် mini dachshund စိတ်ထား